Sunday April 16, 2017 - 23:23:48 in Somali News by Super Admin
Waagacusub.net - Ciidanka Nabadsugidda iyo Sirdoonka Gobolka Banaadir ayaa maanta ku guuleeystay inuu toogasho ku dilo laba Sarkaal oo Al-Shabaab ka tirsan xilli ay qorsheeynayeen iney hoobiyeyaal ku garaacaan Garoonka Muqdisho iyo Xarunta Xalane,si
Waagacusub.net - Ciidanka Nabadsugidda iyo Sirdoonka Gobolka Banaadir ayaa maanta ku guuleeystay inuu toogasho ku dilo laba Sarkaal oo Al-Shabaab ka tirsan xilli ay qorsheeynayeen iney hoobiyeyaal ku garaacaan Garoonka Muqdisho iyo Xarunta Xalane,sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha NISA.
Saraakiisha la dilay ee Shabaabka ayaa hoobiyeyaasha waxeey kala soo baxeen guri uu degan yahay Jeneral Buraale oo gurigga laga ilaaliyo Airport-ka weyn u jira boqol Mitir wax ka yar u jira.
Jeneral-kaan oo horey Al-Shabaab ugu gacangeliyay Baabuur iyo Ciidan uu taliye u ahaay oo fariisin ku lahaay laanta Buuro ayaa la xaqiijiyay inuu lix sanadood la shaqeeynaayey argagixisadda Al-Shabaab.
Jimcahii la soo dhaafay ayaa hoobiyeyaal laga soo bixiyay gurigiisa waxaa lagu garaacay Degmadda Wadajir iyadoo maalmo ka horna Saraakiisha argagixisadda ee maanta la dilay ay toogasho ku dileen xoghayaha degmadda Wadajir iyo Askartii la socotay.
Sarkaal ka tirsan Amniyaat-ka Al-Shabaab oo codsaday inaan magaciisa la xigan ayaa Waagacusub u sheegay in Jeneral Buraale xiriir loo yaqaan xagasha dad ban la lahaay mudo dheer.
Sikastaba ha ahaatee ,Jeneral Buraale oo mudo baaris ku socotay ayaa la ogaaday inuu bil walba lacag dhan todobo kun oo dollar ka helo maamulka Somaliland iyadoo la rumeeysan yahay inuu yahay Sarkaal muhiima oo Al-Shabaab kula shaqeeya amaro laga soo siiyo Hargeysa.